Fihaonambe faha 41 ny UNESCO – METFP
Fihaonambe faha 41 ny UNESCO
Mankalaza ny faha 75 taona nijoroany sy niasany ny UNESCO. Tafiditra indrindra ao anatin’izao fihaonambe faha 41 izao izany fankalazana izany.
Firenena maro no mandray anjara amin’ity fihaonambe ity, anisan’izany i Madagasikara.
Ramatoa Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa – VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, dia isan’ ireo nandray anjara feno amin’izany fihaonambe ao Paris izany, miaraka amin’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena – Ramatoa SAHONDRARIMALALA Marie Michelle, ny COMNAT ary ireo tale isan-tsokajiny. Ka nihaona tamin’ny Birao iraisam-pirenena momban’ny fanabeazana (BIE) izy ireo.
Ny fifanakalozan-kevitra momban’ny fiovaovan’ny toetrandro, ny valan’aretina, ny fifindra-monina, ny famolavolana ny fandriam-pahalemana sy filaminana,… ary indrindra ny fanabeazana sy fiofanana no ho resahana mandritry ny 20 andro mahery.
Fotoana hanaovana jery todika amin’ireo zava-bitan’ny UNESCO, ary hamaritana ihany koa ny ezaka mbola hatao.
Nandrafitra ny fandaharam-potoana ihany koa ny fifidianana ny Tale Jeneralin’ny UNESCO, hitondra mandritry ny efa-taona, izay notontosain’ireo firenena mpikambana, ary hamaritana ny paikady ho tanterahana ny taona 2022 hatramin’ny 2029. Ka lany hitantana indray ny UNESCO Ramatoa Audrey Azoulay tamin’ny isa 155 amin’ny mpifidy 169.